Laba qof shacab ah oo lagu dilay degmada Tiyeeglow iyo cabsi aad u xoogan oo halkaasi ka bilabaatay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Laba qof shacab ah oo lagu dilay degmada Tiyeeglow iyo cabsi aad u xoogan oo halkaasi ka bilabaatay
Wararka naga soo gaaraya degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in dagaalyahanada Al-shabaab ay halkaasi ku dileen labo qof oo ka mid ahaa dadka shacabka ah ee ku nool degmadaas.
Waxay Al-shabaab labadaan qof ku eedeeysay inay la shaqeynayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo maalintii shalay degmadaasi isaga baxay.
Dadka shacabka ah ee ku nool degmada Tiyeeglow ayaa durbadiiba bilaabay inay halkaasi isaga barakacaan, iyaga oo naftooda u cabsanaya inay dhibaato kasoo gaarto dagaalyahanada Al-shabaab.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa maalintii shalay la wareegay gacan ku haynta degmada Tiyeeglow, kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Itoobiya oo in muddo ah halkaasi gacanta ku haayay.
Dhinca kale, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidankooda dib ula wareegi doonaan degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, islamarkaana halkaasi ay awood uga saari doonaan dagaalyahanada Al-shabaab oo maalintii shalay halkaasi la wareegay.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo ay Al-shabaab dil u geystaan dad shacab ah oo ku nool deegaanadda ay gacanta ku hayntooda la wareegaan, kadib markii ay deegaanadaasi isaga baxaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya.